Hop Swap, Nitrome ဂိမ်းသစ်အတွက်ကမ္ဘာနှစ်ခုကြားတွင်လှုပ်ရှားပါ Androidsis
ဒီအမျိုးအစားဟာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပလက်ဖောင်းဂိမ်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်တော်မငြီးငွေ့ပါ။ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်းတွင်ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များနှင့်အခြားဂိမ်းပုံစံများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများပါဝင်သည့်အခြားဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။ RTSs များ၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော Simulator များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာသော 3D ကမ္ဘာများကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်လျှင်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမှုကိုပြသခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုလေ့လာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည် ပလက်ဖောင်း၏အနုပညာအတွက်ပညာ.
Nitrome သည်ထိုလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည် သူသည်များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောဂိမ်းများကိုထုတ်ဝေသည် နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၌ကြီးသောအောင်မြင်မှု။ Nitrome သည်အခြားသူများနှင့်မတူသည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာယခင်စာပိုဒ်တွင်ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည့်အမျိုးအစားအချို့ကိုလှည့်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Hop Swap ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာစာပိုဒ်တပိုဒ်တည်းတွင်ဤစကားလုံးများကိုပြောထားသည်ကိုသက်သေပြနိုင်သည့်အခြားပညာရှိသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် (သင်နားလည်ရန်ယခင်စာပိုဒ်သို့သွားစရာမလို) ။ Hop Swap သည်သင်ပိုမိုမြင့်မားသောနေရာမှနိမ့်ကျသောနေရာသို့သွားရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းပိုမိုကြီးမားသောအခက်အခဲများကိုတွေ့နိုင်ရန်အတွက်၎င်းကိုခွဲခြားရန်ကြိုးစားသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hop Swap သည်ဂိမ်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာရိုးရှင်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုအခြေခံသည်။ ရှိသည် အဝါရောင်ဖွင့်လှစ်ကောင်းကင်ပြာနှင့်ခရမ်းရောင်အတွက်မျက်နှာပြင်။ ကျွန်ုပ်တို့သာလွန်ကောင်းမွန်သောပွတ်ဆွဲမှုပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်သို့ပြန်သွားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။ သင်ရုံတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားမှပြန်လာရန်လိပ်စာပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်။
ဒီဂိမ်းစက်ရုပ်တွေနဲ့ငါတို့ပုံမှန်လမ်းကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတဲ့ပုံမှန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ အဓိကဥပဒေတွေအများကြီးရှိတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ငါတို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ထိန်းချုပ်ရေးနေရာတွေကိုဖြတ်သွားနိုင်ကြတယ်။ ) ။ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ် သူတို့အားနှစ်ခုကမ္ဘာအကြားရွှေ့ အတားအဆီးအမျိုးမျိုးကိုကျော်လွှားရန်ဆိုလိုသည်မှာဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်ကထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာမတွေ့ပါကအကောင်းဆုံးအရာမှာရှာဖွေရန်ကြိုးစားရန်အခြားအဖြစ်မှန်သို့တိုက်ရိုက်သွားရန်ဖြစ်သည်။
အခြားပလက်ဖောင်းများကိုကြည့်ပါကဤအနည်းငယ်ကွဲပြားသောအခြေအနေဖြင့် Hop Swap သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိမီးခိုးရောင်အရာအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုစေသည်။ ဒီအပြင်၊ သင်သိရလိမ့်မည် ကွဲပြားခြားနားသော swipes နှင့်အတူဇာတ်ကောင်ကိုင်တွယ် သူတို့အားပလက်ဖောင်းပေါ်ခုန်နိုင်ရန်အတွက်။ အခြားဂိမ်းများကဲ့သို့ပင်သင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်များကိုကာကွယ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဒင်္ဂါးများကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်ပြီးအစမှဂိမ်းစတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အတော်လေးကောင်းစွာကိုင်တွယ်နှင့်ဤနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်နှင့်ရန်သူများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကမ္ဘာနှစ်ခုအကြားဖြစ်ခြင်း, က dwarves အဖြစ် run နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်းသောဂိမ်း။ သင်ရပါလိမ့်မယ် ကွဲပြားခြားနားသောပဟေlesိဖြေရှင်းပါအချို့နေရာများတွင်သင်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ပြောထားတာကဒီအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နက်နဲသောနက်နက်နဲနဲစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းဟာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
Hop Swap သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် အနည်းငယ်မူရင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေအောင်မြင် ပြီးတော့ Nitrome နဲ့အလွန်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ pixelated graphics နဲ့ retro ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဂိမ်းတွေအားလုံးဟာမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်လျောဖို့သူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံစတိုင်ကိုစွဲမြဲစွာရှိနေလို့ပဲ။
သင်ရတယ် အခမဲ့ မိုက်ခရိုငွေပေးချေခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းမရှိဘဲ Google Play စတိုးမှကြည့်လျှင်ဂိမ်းတစ်ခုလုံးသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အပြစ်တင်နိုင်သောဗီဒီယိုဂိမ်း သေးငယ်တဲ့နှေးကွေး ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူမျက်စိမှပုံပေါ်ပေမယ့်ဇာတ်ကောင်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါ။ အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွားနိုင်ရန်အတွက်ချောချောမွေ့မွေ့အနည်းငယ်ရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။ ကျန်တဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေအတွက်တော့ Nitrome လိုမျိုးဂိမ်းတစ်ခုမှာမျှော်လင့်ထားတာကိုသူကပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါ။
မင်းက Nitrome ဂိမ်းဆိုရင် ဒီစာရင်း 10 ကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ကွဲပြားသောထိတွေ့မှုရှိသည့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့် Hop Swap ဖြင့် Nitrome သည်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်
Leagoo M8 သည် Black Friday ကိုလျှော့စျေးနှင့်အတူရောက်ရှိသည်